OnePlus Nord na-enweta OxygenOS 11 na usoro OnePlus 7 na 7T na-emeghe Open Beta 3 | Gam akporosis
OnePlus na-enyezi mmelite ngwanrọ ọhụrụ n'ọtụtụ ekwentị ya. El OnePlus NorthMaka akụkụ gị, ị na-enweta OTA nke OxygenOS 11 dabere na gam akporo 11 ugbu a, mgbe ụdị usoro OnePlus 7 na 7T nweta Mepee Beta 3 nke OxygenOS 11 dabere na gam akporo 11.
Nke ahụ bụ otú ọ dị. Ma eleghị anya, ị na-achọpụta na ọ na-achọsi ike na etiti etiti ahụ na-enweta mbipụta nke ikpeazụ na nke ikpeazụ nke mmelite ọhụrụ ahụ ọ bụghị ọkwa dị elu e kwururịị. Thelọ ọrụ ahụ ebutewo ọbịbịa nke ngwugwu ngwa ngwa ahụ maka Nord. N'otu aka ahụ, OnePlus 7 na 7T dị nso ịnata mmelite kwụsiri ike.
Kedu ihe ọhụụ na nkwalite OxygenOS 11 maka OnePlus Nord na OnePlus 7/7 Pro na 7T / 7T Pro?
Nke a bụ mgbanwe mgbanwe zuru ezu nke onye nrụpụta nyere maka OnePlus Nord na mmelite OxygenOS 11 n'ụdị kwụsiri ike ya dabere na gam akporo 11:
Mmelite na gam akporo version 11
Ọhụrụ UI imewe na-enye gị a ọzọ ala ahụmahụ na dị iche iche zuru ezu optimizations
Kachasị kwụsie ike nke ụfọdụ ngwa ndị ọzọ ma melite ahụmịhe ahụ
Ejiri ọhụụ elekere ọhụụ, ihe jikọrọ ya na Parsons School of Design. Ọ ga-agbanwe dịka data ojiji ekwentị (Gaa na: Ntọala - Nhazi - Elekere na ihuenyo ihu igwe)
Na-adịbeghị anya agbakwunyere Kanvas na-egosipụta oge niile, nke nwere ike wepụpụta ihe ndepụta nke isiokwu site na foto ọ bụla ma gosipụta ya na ihuenyo mkpọchi (gaa na: Ntọala - Nhazi - Akwụkwọ ahụaja - Kanvas - Họrọ nyocha foto ma ọ nwere ike iwepụta ya na akpaghị aka)
Ugbu a na-akwado njirimara na-enye aka ma hazie oge. (Gaa na: Ntọala - Ngosipụta - Ọnọdụ gbara ọchịchịrị - Tetanụ onwe - Wra ụra na-akpaghị aka ruo Dawn / Oge Oge Omenala)
Ọhụrụ interface ọrụ interface
Agbakwunyere wijetị ihu igwe na mmetụta mmụgharị mara mma
Nkọwa akụkọ na nso nso a, nke nwere ike ịmepụta akụkọ kwa izu site na iji foto na vidiyo mpaghara gị.
Kachasị mma ọsọ iji melite ahụmịhe nlere onyonyo.
N'aka nke ọzọ, nke a bụ mgbanwe nke Open Beta 3 nke OxygenOS 11 dabere na gam akporo 11 maka ngwaọrụ nke usoro OnePlus 7 na 7T, nke gụnyekwara Pro dị iche iche nke ndị a, n'ezie:
Kachasị maka mmegharị mmegharị ahụ.
Ofu umengwụ ibu ọnụego nke na ụfọdụ
Ofu lag nke mgbe na-akpọ vidio e dere na ihuenyo
Ofu obere puru iche glitch nke na Ugboro abụọ Mgbata Teta
Edoziri nsogbu ahụ Netflix enweghị ike igwu vidiyo HD
Edoziri nsogbu agbachi nkịtị mgbe agbanweela usoro ịgbanye njem Bluetooth gaa AptX
Njikwa njikọ Wi-Fi emelitere ma belata nkwụsị intaneti.
Ihe ngosi na ngosi mgbe niile yiri ka ọ ga-adị na OnePlus Nord na nsụgharị Pro nke OnePlus 7 na 7T. Nke a ga-agbanwe n'oge na-adịghị anya.
Ngwungwu ngwa ngwa ndị a kwesịrị ịbụ dịlarị ụwa niile maka nkeji niile. Ọ bụrụ na ọ bụghị, a ga-etinye ya n'ụzọ zuru ezu na ụbọchị ole na ole. I nwekwara ike ịlele ma ọ bụrụ na ị nwere mmelite ọhụrụ ndị a site na ngalaba dị iche iche na ntọala nke ama OnePlus gị.
N'ikpeazụ, nke a na-emebu: anyị na-akwado ka ekwentị nke ọ bụla jikọọ na netwọk Wi-Fi siri ike ma dị elu iji budata wee wụnye ngwugwu ngwongwo ọhụrụ / beta, iji zere oriri achọghị nke data ngwugwu ngwugwu. Ọ dịkwa oke mkpa inwe ọkwa batrị dị mma iji zere nsogbu ọ bụla nwere ike ime n'oge usoro nrụnye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus Nord na-akwụ ụgwọ OxygenOS 11 na OnePlus 7 na 7T na-emeghe Open Beta 3
Etu esi eji mmetụta Morph na TikTok
TikTok nke YouTube dị